Ikhaya » Abantu kuKhenketho noKhenketho » Inkosi entsha ebizwa i-Japan National Tourism Organisation kwiofisi yaseNew York
Inkosi entsha ebizwa i-Japan National Tourism Organisation kwiofisi yaseNew York
UMichiaki Yamada ujonge ukusebenza neqela le-JNTO ukubonisa nokubonisa iyantlukwano kwindalo nakwinkcubeko yelizwe laseJapan kubahambi abaninzi baseMelika.
Michiaki Yamada ukuba akhokele iofisi yaseNew York yeJNTO
UMichiaki Yamada ulandela uNaohito Ise
Ngaphambi kokuba abuyele e-US, uMichiaki Yamada ukhuthaze ilifa lemveliso laseJapan kunye noNobhala weKhabhinethi
UMichiaki Yamada ufikile eNew York evela eJapan esiya kwi-ofisi yaseNew York Umbutho weSizwe wezoKhenketho waseJapan (JNTO), ephumelela uNaohito Ise.
Umnumzana Yamada wazalelwa eSaitama Prefecture emantla eTokyo waphumelela iSikolo seYunivesithi yaseWaseda seNzululwazi yezoPolitiko nezoQoqosho ngo-2003. Waqala inkonzo yakhe kurhulumente noMphathiswa wezoMhlaba, iziBonelelo, ezoThutho noKhenketho ngo-2006, esebenza kwiindawo ezahlukeneyo Izikhundla neCandelo loLawulo lweNdlela.
Ukusuka kwi-2008 ukuya kwi-2011, uMnu. Yamada usebenze neCandelo loPhando lwamaXabiso oMhlaba kunye neCandelo lezoCwangciso lezoThutho ngaphambi kokufunda phesheya kwiYunivesithi yaseMichigan. Uye wabuyela eJapan emva kokufunda kwakhe kwaye wasebenza neNtloko yoMgaqo-nkqubo weNtsebenziswano yeTrans-Pacific, iArhente yoKhenketho eJapan, egxile kukhuthazo olungenayo lwezokhenketho, nanjengesekela mphathi omkhulu weCandelo leziXhobo zezoThutho. Phambi kokuba abuyele e-US ukuba abe nguMlawuli oLawulayo we-Ofisi ye-JNTO eNew York, wanyusa ifa lemizi-mveliso yaseJapan kunye nooNobhala beKhabhinethi.
"Kulilungelo ukubuyela e-United States kwaye ndisebenza ne-JNTO New York Office," utshilo uMnu. Yamada. "Njengokuba samkela isiqhelo esitsha kwilizwe lasemva kwe-COVID, ndikulindele ukusebenza neqela le-JNTO ukubonisa nokubonisa iyantlukwano kwindalo nakwinkcubeko yelizwe laseJapan kubakhenkethi abaninzi baseMelika."
Umnumzana Yamada ungumntu othanda ukuzonwabisa ngaphandle kwaye uzokuzimanya nenkosikazi yakhe kunye nonyana wakhe kwangoko kunyaka olandelayo.